Tsikelikely hahazoana medaly ho an'ny Fetin'ny Reny | Asa tanana
Irene Gil | | asa-tanana, Asa tanana taratasy, Asa-tanana ho an'ny Fetin'ny Reny, Asa-tanana ho an'ny ankizy, Fotoana manokana
Ao amin'io tutorial Ampianariko mamorona ianao medaly taratasy, tonga lafatra azo atao ankizy. Ankehitriny ny Fetin'ny reny Azon'izy ireo atao manokana ny manome azy tsirairay ho an'ny reniny. Afaka manome anarana na andian-teny azy izy ireo, ary mampiasa izay tiany loko.
Mba hanaovana azy ireo medaly ho an'ny Fetin'ny reny mila izao manaraka izao ianao fitaovana:
Taratasy na baoritra miloko
Andao hanomboka amin'ny famoronana ny ampahany boribory of the medaly. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy manapaka a ianao esory ny taratasy na ny baoritra amin'ilay loko nofidinao. Ny sakany dia miankina amin'ny halehiben'ny fanirianao hanana medaly. Ary ny halavany dia tokony ho farafaharatsiny 50cm. Raha tsy lava loatra ny taratasinao dia afaka manao kofehy roa ianao, aza manahy fa hataonay mametaka azy ireo. Tokony aforeto ireo tapa-taratasy toa ny a angorodao. Aforitra iray amin'ny lafiny iray, iray amin'ny lafiny iray, ary toy izany hatrany hatramin'ny farany.
Lakaoly ny tendrony iray amin'ny farany fanakatonana a faribolana, toy ny karazana zipo. Rehefa manana toy izao ianao dia atositosiho midina ny afovoany dia ho hitanao fa mihosin-drora izy io ary misy faribolana misy fefy akordio.
Andao hataontsika izao faribolana afovoany. Manapaka faribolana iray amin'ny baoritra kely kokoa noho ilay akordeon izay nataonao. Apetaho eo afovoany izany. Mba hanampiana haingon-trano dia azonao atao ny manisy sary manodidina ny sisiny.
Fotoana hisamborana ny kofehy haingon-trano. Hetezo kofehy roa ary apetaho amin'ny endrika V mivadika avy any aoriana. Tsy maintsy mianjera izy ireo. Karakarao ny tendrony mba ho vita tsara tarehy kokoa.
Farany, soraty eo afovoany ny hafatra na ny Nombre izay tianao.
Ary hanana ny anao ianao medaly namboarina mba hanome na handravaka. Manana volavola samihafa an'arivony maro ianao miaraka amin'ny loko taratasy, tadin-dokotra ary marika maro samihafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Asa tanana » asa-tanana » Tsikelikely hahazoana medaly ho an'ny Fetin'ny Reny